The Ab Presents Nepal » ओमानमा बंगालीसँग बस्दै आएकी दुई नेपाली महिलाको हत्या!
ओमानमा बंगालीसँग बस्दै आएकी दुई नेपाली महिलाको हत्या!
ओमानमा दुई नेपाली महिलाको हत्या भएको छ । बैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा ओमान पुगेकी मोरङ र बर्दिया घर भएकी दुई नेपाली महिलाको हत्या भएको ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि २२ महिनाअघि ओमान पुगेकी मोरङको लेटाङकी अप्सरा दाहालको गएको जेठ ३ गते हत्या भएको हो
सुनिता भिजिट भिसामा ओमान पुगेर घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन् । अप्सरा र सुनिता दुवै जना काम गर्ने ठाउँ छोडेर भागेर बंगाली नागरिकसँग बस्दै आएको प्रारम्भिक जानकारी पाएको दूतावासले बताएको छ । कान्तिपुर बाट साभार